NFC: Pedyo neMunda Kukurukurirana uye Kushambadzira
Iyo nhare mbozha iri kuramba ichichinja, uye vashambadzi chete vanofambirana neshanduko uye vanovaisa mumatanho avo ekusimudzira uye ekubatirana anomira mukana wekubudirira munyika yanhasi inokwikwidza.
Iyo tekinoroji yazvino yekuita kuti ive yakakura iri Pedyo neMunda Kutaurirana (NFC).
Chii chiri Pedyo neMunda Kukurukurirana?
Pedyo neMunda Kutaurirana tekinoroji yakaiswa mukati mezvazvino nharembozha inobvumidza kutaurirana kwakachengeteka (pamwe nekusimbiswa) pakati peye nharembozha nedhiraivhi yekufambisa. NFC inobvumira vashanyi kuti vaongorore zvakadzama, kuti vatarise midhiya yakapfuma yakagadziriswa, vagamuchire zvakanangwa zvakanangwa, vagovane zviitiko uye zvakanyanya kukosha, vatenge, zvese kuburikidza neefoni yavo.
NFC ndeye hukuru hukuru pamusoro pe QR kodhi. QR kodhi dzinoda kurodha pasi app uye kurodha bar kodhi kuti uwane zvemukati zvinopfuura kupfuura peji rewebhu. NFC inobvumira vashandisi venhare kuti vawane zvakapfuma zvemukati uye vadyidzane neiyo mhando mushe. Zvese zvinoshandiswa nemushandisi kubata foni yefaira pane chero RFID-yakanamirwa posita, kushambadzira kwemagazini, nzvimbo yekutengesa kana chero chinhu chinosimudzira, kuwana mukana wepasirese pasirese yezvehupfumi nenhau.
Kune mushambadzi, izvi hazvireve kungobatana nekuita nevashanyi zvirinani, asi mukana wekutorawo hunhu hwevashanyi uye zvido zvenguva-chaiyo mune chaiyo-nyika. Icho chokwadi chekuti tekinoroji iyi inosanganisa kukwidziridzwa pamwe nenzvimbo yekutengesa, nokudaro ichibvumidza vashanyi vanofarira kutenga kutenga ipapo zvinogona kungoita ichi chitsvene chevatengesi mumazuva anotevera.
NFC matekinoroji anogona kushandiswa kuzivikanwa, kutikitikiti, nguva uye kuenda, kuvimbika uye zvirongwa zvehunhengo, kuwana kwakachengeteka (kwepanyama kana kuburikidza nechishandiso) kana kushandiswa kwekufambisa - kuwedzera mukugadzirisa kwekubhadhara. Sekungotarisa kwatinoita nzira nezviitiko pamhepo, nzvimbo yacho inozokwanisa kuongorora nzira nezviitiko zvisiri pamhepo - pamwe zvichitora nekupa mubayiro maitiro evashandisi veNFC. Thinaire akapa vhidhiyo iyi inotaura nedzimwe dzedzimwe nzira dzekuwedzera dzemakambani
Google yatotanga Google Android nehunyanzvi hweNFC, uye imwe nhare mbozha inoteedzera kana kuzivisa kuburitswa kweNFC munguva pfupi inotevera.
Kana iwe uine Google Android iri NFC inokwanisa, shanyira iyo Chitoro cheGoogle Android. Kana iwe uri mugadziri, Google yakaburitsa izvi zvakadzama vhidhiyo paNFC kubudirira.
Download Pedyo neMunda Kutaurirana kweDummies kunyatso tarisa paNFC. Tsvaga:
Izvo vatengi vari kutsvaga nhasi, kunyanya izvo zvakaoma-kunzwisisa millennials
Maitiro ekugadzira anomanikidza zviitiko zve mobile uye kushambadzira mishandirapamwe kutyaira mari uye brand kuvimbika
Ndeapi makesi ekushandisa anobatsira zvakanyanya kubva kuadhijitari yechigadzirwa uye smart kupakata
Maitiro ekururamisa akakodzera anogona sei kuvandudza brand kuvimbika uye kutyaira mobile commerce
Mashandisiro ekugadzirisa kugona kweiyo gore kuitira kugonesa kushambadzira kunosvika kune vatengi vatsva uye kunoita kuti vatengi varipo vafare
Ungatanga sei mune yako yega omnichannel mishandirapamwe uchishandisa NFC seyepakati tekinoroji
Dhawunirodha padyo neMunda Kutaurirana kweDummies
Tags: upindokuendamari isina marigoogle androidchikwama cheGooglekuongororaLoginnhare yekubhadhara mafonimobile kubhadharaMobile rwokugadzirapadyo nemunda kutaurirananfcpoindi yekutengesakuwana kwakachengetekachibatisosmartphone kubhadharathinairechikwangwaninguva uye kupinda